Ciidamada dowladda Soomaaliya oo isku diyaarinaya guluf si looga xoreeyo gobolka Shabeellaha Hoose Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada dowladda Soomaaliya oo isku diyaarinaya guluf si looga xoreeyo gobolka Shabeellaha Hoose Al-Shabaab
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo isku diyaarinaya guluf si looga xoreeyo gobolka Shabeellaha Hoose Al-Shabaab. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya guluf si looga xoreeyo gobolka Shabeellaha Hoose maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah.
Ciidamo cusub oo aad u hubaysan ayaa la geeyay deegaano kuyaala gobolka Shabeellaha Hoose si ay dagaal ula galaan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wali ah mid kamid ah deegaanada kuyaala ay koonfurta Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ku xoogantahay.
Bishii April ee sanadkan, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa iclaamiyay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab, taasoo muddo sannado ah u dagaalamaysay in ay awooda ka tuurto dowladda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Abuja-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaasha urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa sheegay in ay waajib tahay in madaxweynaha dalka Gambia Yahya Jammeh uu xukunka ka dego sababtoo ah waa looga guuleystay doorashada. Madaxweynaha dalka Liberia Ellen [...]